ဂ်ပန္တို႔အေလးထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္စိတ္ဓါတ္ | Working Friends
2018年5月7日 2018年5月7日 Ever Smile
【Unicode】　⇒Zawgyi Font ျဖင့္ ဖတ္ရန္(စာေပၚႏွိပ္ပါ)
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Leadership ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ထိုက်သော အရည်အချင်းများဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးကိုတင်ပြပါရစေနော်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာ ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓါတ်ကို အလေးပေးကြတာတ​ွေ့ရပါတယ်။ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူကိုပဲ အလုပ်ခန့်ချင်ကြတာပါပဲ။ လူတိုင်းကတော့ ပြီးပြည့်စုံတာမရှိပေမယ့် ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓါတ်များများတွေ့ရသူဟာ အားကိုးယုံကြည်ခံရတာချည်းပါပဲ။
ဒီခေါင်းဆောင်စိတ်ဓါတ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က Gary Yuki က Organization Theory (組織論そしきろん) ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူ့ရဲ့လေ့လာသုံးသပ်ချက်တွေက ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်အလုပ်ခွင်မှာလည်း ဒီအကြောင်းအရာတွေကို တန်ဖိုးထားတာတွေ့ရလို့ တင်ဆက်ခွင့်ပြုပါ။
ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုလူလဲ? Gary Yuki က Leader ဖြစ်သင့်တယ်လို့ထင်ထားတဲ့ အချက်၁၆ချက်ကို အဆင့်အလိုက်တင်ပြပါရစေနော်။
စသည့်အချက်များကတော့ Gary ကသူယူဆထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သင့်သော အရည်အချင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ဆိုရင်ရော ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခုဖော်ပြထားတဲ့ ၁၆ချက်အထဲက ဘယ်အချက်တွေမိမိနှင့်ကိုက်ညီသည်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါနော်။
ဒီ၁၆ချက်မှာဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းတို့ ထင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါရှိသင့်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ဘယ်အချက်လို့ ထင်မိပါသလဲ? သူငယ်ချင်းတို့ လေးစားအားကျတဲ့ခေါင်းဆောင်က ဘယ်လိုအချက်တွေနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သူပါလဲ?
အကယ်၍သင်ဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ရန် ဒေတာတွေစုဆောင်းပြီး မိမိအလုပ်တွင် အသုံးချမည်ဆိုပါက မိမိစုဆောင်းထားသော ဒေတာများကို လိုအပ်ချက်မရှိရလေအောင် အမျိုးအစားအုပ်စုခွဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာ အသုံးဝင်မှာပါ။ စဉ်းစားကြည့်ပါနော်။
ဥပမာ- ကျောင်းတက်ဖို့ စာသင်ကျောင်းများနှင့်ပတ်သတ်၍ အမျိုးအစားခွဲမည်ဆိုပါတော့။
ကျောင်းများသည် အစိုးရကျောင်း Public School နှင့် Private School ဆိုပြီးကျောင်းအမျိုးအစား ၂မျိုးရှိပါတယ်။ ထိုကျောင်းများတွင်မှ မိန်းကလေးကျောင်း၊ယောက်ျားလေးကျောင်းနှင့် ကျားမရောနေသောကျောင်းဟူ၍ အမျိုးအစား၃မျိုးထပ်ရှိပါတယ်။အဲ့ထဲမှာမှ ဘယ်လိုပညာရပ်တွေ အဓိက သင်နိုင်တဲ့ကျောင်းလဲ။ စသဖြင့်
ထိုကဲ့သို့အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းကို分析 Bunseki လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ Bunseki လုပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ မိမိက ဘယ်အုပ်စုထဲမှာ ပါနိုင်သည်ကို တွေးတော့မှန်းဆရပါတယ်။（自己分析　မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ခြင်း）
အထက်ဖော်ပြပါကျောင်းများတွင် သင်ကျောင်းတက်မည်ဆိုပါက မည်သည့်အုပ်စုများတွင်တက် ရောက်နိုင်ပါသလဲ?စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးမှ ကျောင်းရွေးကြသလိုပဲ
ထို့အတူအထက်တွင်ဖော်ပြထား ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ထိုက်သော ၁၆ချက်ထဲတွင်လည်း သင်သည်အချက်မည်မျှတွင်အုပ်စုဝင်ဖြစ်နေပါသလဲ၊နောက်ပြီး မည်သည့်အချက်ကို လက်တ​ွေ့ဖြစ်ချင်ပါသလဲ မှန်းဆ တွေးတောနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်း ပညာတွေသင်ယူတက်မြောက်ပြီးစီးလို့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝက စာတော်ခဲ့ပေမယ့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သောအခါ ဘာမှမတတ်၊နားမလည်၊ အများနှင့်မဆက်ဆံတတ်၍ ကျရှုံးနေသော လူငယ်များလည်းတချို့ရှိကြပါတယ်။ ကျောင်းနေစဉ်အရွယ်ကတော့ စာမကြိုးစားခဲ့သော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်တွင်အောင်မြင်၍ သူဌေးဖြစ်နေသော ရာထူးကြီးနေရာဌာနများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော တချို့သူများလည်းရှိကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အားလုံး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သောအခါတွင်လည်း ပညာရေးတွင်အောင်မြင်နိုင်ခဲ့ရုံသာမက လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း ဆက်လက်အောင်ပွဲခံနိုင်ပြီး ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓါတ် ရအောင် အတူတူကြိုးစားကြရအောင်ပါနော်။
Previous Previous post: ထရိန္နင္အလုပ္သင္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း 研修（けんしゅう）センター (၂)
Next Next post: ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ သင္ယူေျဖဆိုနိုင္ေသာ (Certificate) လက္မွတ္မ်ားအေၾကာင္း(၄)